अष्ट्रेलियामा किन दन्किरहेको छ आगो, अहिलेसम्म कति क्षति भयो? « हाम्रो ईकोनोमी
अष्ट्रेलियामा किन दन्किरहेको छ आगो, अहिलेसम्म कति क्षति भयो?
.महिना दिनभन्दा बढी बितिसक्यो तर अष्ट्रेलियाको आगो निभ्ने सुरसार छैन। गत साता भने अष्ट्रेलियाबाट संसारलाई नै भावुक बनाउने तस्बिर आए। ती तस्बिर मान्छेका नभई आगलागीबाट मरेका र बाँच्न सफल भएका वन्यजन्तुका थिए: ठूलो आगोको मुस्लोबाट भाग्न नसकेका र बाँचेकोमा एकअर्कालाई अंकमाल गरिरहेका जनावरका तस्बिर। जैविक विविधता विज्ञहरूका अनुसार आगलागीमा परी यसपालि अष्ट्रेलियामा झन्डै ५० करोड बन्यजन्तु र पशुपंक्षी मारिएका छन्।
यति भयंकर आगलागी कसरी भयो ?